Nzira yekuodha sei izere vhezheni yechigadzirwa? - DataNumen
Kune chimwe nechimwe chigadzirwa, pane yemahara demo vhezheni, iyo inogona kutorwa pasi kubva muchigadzirwa peji rekutanga nekudzvanya iyo "Free Download" bhatani.
Iyo demo vhezheni inowanzoitika NOT kuburitsa iyo yakagadziriswa faira, kana kumanikidza zvimwe zvausingakwanise pane iyo yakagadziriswa faira. Kuti uwane iyo faira kana kubvisa izvo zvausingakwanise, unofanirwa kudzvanya iyo "Tenga izvozvi" bhatani kuodha yakazara vhezheni.
Tinobvuma ese makuru makadhi echikwereti, Maestro (UK), giropay (Germany), iDEAL (Netherlands), Bank / Wire kuchinjisa, WebMoney, Kutenga maodha, PayPal, Cheki, Direct Dhibhiti uye Fax / Mafoni Orders.
Kana kambani yako kana chinzvimbo chiri kufarira kupa rezinesi chigadzirwa chedu kune vashandisi vanoverengeka, unogona kuwana vhoriyamu dhisikaundi uye chengetedza mari yakawanda nekutenga marezinesi mazhinji pamwechete.
tenga, demo vhezheni, full version, urongwa, tenga
Yakarongwa musi waMay 13, 2021